UKatie Daisy uyaluvuyisa usuku lwakho ngemifanekiso yakhe yeentyatyambo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
«Ixesha elizayo lelabo bakholelwa kubuhle bamaphupha abo«, Ngaba elinye lamabinzana esinakho fumana kuyo nayiphi na imizekeliso UKatie Daisy uyasonwabisa kwezi ntsuku zasentwasahlobo zisibonisa indlela eya ehlotyeni.
UKatie usithatha ngolu suku ukuzama ukuzizalisa ukuzithemba, amaphupha kunye novuyo Ngemibala yayo eyahlukeneyo efuna loo moya upheleleyo kunye nokuziva. Umzobi okhulele emaphandleni kwaye nothotho lukhupha konke ukukhanya akwaziyo ukukufaka ngeli xesha likhethekileyo lonyaka.
Umbono wolu ngcelele lwemizekeliso, ngaphandle kokubonisa eyona mibala icacileyo, ncede usuku lwakho usuku ngothotho lwamabinzana afuna inkuthazo kwaye ushiye iingxaki zimisiwe okwethutyana.
Sebenzisa iikowuti ezivela kuOscar Wilde, kwiMonet kunye no-Eleanor Roosevelt onemixholo yeentyatyambo apho tyheli, orenji, bomvu, luhlaza, nohlaza okwesibhakabhaka bathatha inqanaba eliphakathi Kwakhona ifonti esetyenzisiweyo idlala ngayo yonke loo mibala ukugxininisa iimvakalelo, ithemba nothando ukuba yonke loo myalezo uboniswe kakuhle udlulise kulo msebenzi ubetha kangaka.
Daisy Thengisa umsebenzi wakho eThe Wheatfield, ithandwa kakhulu Ivenkile ye-Etsy.
Ngaphandle kokuprinta, amakhadi kunye neemagnethi, ukwangumbhali. Lakhe Incwadi «Ungayifumana njani intyatyambo yasendle» ikukhuthaza ukuba uzifumanele ngokwakho indalo kwaye ukwazile ukuyithengisa kuyo yonke iplanethi ngoku sele upapashe uhlelo lwesine.
Su INew York Times iBesteller iyafumaneka ukusuka amazon, ukuze ube nayo yonke indlela yayo yokutsala umdla ekhayeni lakho nanini na ufuna.
Kwiinyanga nje ezi-2 ezidlulileyo besele sineprojekthi yobugcisa kugxilwe kumxholo weentyatyambo, kodwa ngeli xesha kumall. Ungayifumana kweli qhagamshelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imizobo enemibala enamabinzana kwaye igcwele indalo yokukukhuthaza ngomhla wakho
Iinqwelomoya zeehelmetiki zokwenza izilwanyana ezinesiphene ezenziwe ngu-Blank William